इस्लामले संरक्षण गरेको हिन्दु र बौद्ध संस्कृति - Khabarkura.com
इस्लामिक गणतन्त्र पाकिस्तान । नेपालको मित्रराष्ट्र । पाकिस्तानसँग नेपालको सम्बन्ध सधैंभर मैत्रिपूर्ण रहँदै आएको छ । यी दुई मुलुकबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएसँगै समानता, भ्रातृत्व र भावनात्मक एकताको सम्बन्ध रहँदै आएको छ । पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित कुटनीतिक सम्बन्ध, व्यापारिक सम्बन्ध शैक्षिक सम्बन्ध आज पनि आआफ्नो हैसियत अनुसार जारी छ ।
दुई मुलुक एक आपसमा नजोडिएपनि पाकिस्तानसँग नेपालको अर्को सम्बन्ध भनेको सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्ध पनि हो । हुन त धेरैलाई लाग्नसक्छ, पाकिस्तान इस्लामिक मुलुक भएका कारण मुस्लिमका लागि मात्रै हो, तर पाकिस्तानले अल्पसंख्यक हिन्दु र बौद्ध संस्कृति जोगाउनका लागि पनि पछिल्ला केही दशकयता मेहनत गरेको छ । भारत र पाकिस्तान विभाजन हुनुपूर्व रहेका धार्मिक सभ्यताहरुको पुनर्निर्माणको क्रम पाकिस्तानमा जारी छ । र, यसको कडी नेपालसम्म जोडिएको छ । बहुसंख्यक हिन्दुधर्मावलम्बी भएको नेपालसँग साइनो राख्ने केही हिन्दु र बौद्ध धर्मसँग जोडिएका सम्पदाहरु पाकिस्तानमा अहिले पनि सुरक्षित राखिएका छन् । केही सम्पदाहरु पुनर्निमार्णका लागि पहल भैरहेको छ ।
कृष्ण मन्दिर निर्माणका लागि शिलन्यास हुँदै
पछिल्लो केही समय पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा हिन्दु मन्दिर निर्माणको विषयले निकै चर्चा पायो । हिन्दु मन्दिर बनाउन रोक लाग्यो भनेर पाकिस्तानको विरोधमा नारा लाग्यो । केही अतिवादी इस्लामिक समुहले इस्लामावादमा कृष्ण मन्दिर बनाउन नदिन सरिया कानुनको सहारा लिन खोजे, नियमित अदालतको सहारा समेत लिन खोजे । मुद्दा दायर गरे, निर्माणमा अवरोध पुर्याए । तर, मन्दिर निर्माणको कामलाई अवरोध पुर्याउन खोजिए पनि त्यहाँको अदालतले समेत निर्माणको कामलाई सदर गरिसकेको अवस्था छ । मन्दिर निर्माणका लागि पाकिस्तान सरकारले १० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।
गल्फ न्यूजका अनुसार पाकिस्तान सरकारले देशभर ४०० वटा हिन्दु मन्दिर पुनर्निर्माणको योजनालाई अघि बढाएको छ । सिलायकोटमा रहेको जगन्नाथ मन्दिर र पेशावरमा रहेको एकहजार वर्ष पुरानो शिवालयको पुनर्निर्माण सुरु भैसकेको गल्फ न्यूजले जनाएको छ ।
त्यसो त, लाहौरमा रहेको शिख समुदायको पवित्र तीर्थस्थल करतारपुर मा भारतसँग जोडिने कोरिडोर खुल्दा पाकिस्तान र भारतका लाखौं शिख समुदाय हर्षित बने । दुश्मनीपूर्ण सम्बन्ध रहेका पाकिस्तान र भारतको बीचमा करतारपुर कोरिडोरले मित्रताको कोरिडोर बनाउन सक्छ कि भन्ने झिनो विश्वास अझै पनि दुई मुलुकका शान्तिप्रेमी जनतामा बाँकी नै छ ।
क्वेटामा रहेको २०० वर्ष पुरानो गुरुद्वाराको पुनर्निर्माण समेत सुरु भएको छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले अल्पसंख्यकहरुको धर्म, संस्कृति र अधिकारको संरक्षणका लागि पहल गरेका छन् । यद्यपी, पाकिस्तानबारे नेपालमा खासै समाचार सुनिँदैन । पाकिस्तानबारे बोल्ने भारतीय संचारमाध्यम हुन । उनीहरुबाट कस्तो प्रकाशित प्रसारित हुन्छन् भन्ने तथ्य नेपालसम्बन्धी हालैका घटनाक्रमले समेत देखाएकै छ । यसकारण नेपालको मैत्रिपूर्ण सम्बन्ध रहेको मित्रराष्ट्र पाकिस्तानबारे नेपालले स्वतन्तपूर्वक विचार बनाउनका लागि नेपालकै आफ्नै स्रोतको उपयोग गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
नेपाल–भारत–पाकिस्तान धार्मिक साइनो
पाकिस्तानको रावलपिण्डीमा रहेको तक्षशिलाको साइनो नेपालको लुम्बिनीसँग रहेको छ । इस्लामावाद–लाहोर राजमार्ग आसपासमा रहेको कटासराज क्षेत्र हिन्दु धर्मावलम्वीका लागि अमृत धरोहर रहेको छ । त्यसो त, धार्मिक भाइचारासम्बन्ध सुधारकै लागि करतारपुर कोरिडोर खुला गरिएको छ । भारतीय तिर्थयात्रीहरू पाकिस्तानका धार्मिक सम्पदास्थलमा पुग्छन् । दुई मुलुकबीच राजनीतिक स्तरमा सम्बन्ध सुधार हुने हो भने, यी सम्पदाहरूको अझ बढी प्रचारप्रसार हुने देखिन्छ ।
भारत पाकिस्तान सम्बन्ध सुधारको बाछिटा नेपालमा अवश्य पर्छ नै । दुई देशबीच मैत्रिपूर्ण सम्बन्ध रहे पनि कनेक्टिभिटीका कारण निकै टाढा छन् नेपाल–पाकिस्तान । सीधा हवाई यात्रामा अढाई घण्टामा पुगिने इस्लामावाद यतिबेला कम्तिमा १८ घण्टा टाढा रहेको छ । सिन्धु नदी आसपासदेखि ब्रम्ह्पुत्र आसपाससम्म फैलिएको सभ्यताको विकासले नेपाल-भारत-पाकिस्तान जस्ता मुलुकको जनस्तरको सम्बन्धलाई राजनीतिक सम्बन्धले अलग गर्न नसक्ने देखिन्छ । यद्यपी, अहिलेको भूराजनीतिक जटिलताले भने यो विषय परिकल्पना जस्तै लाग्छ ।
पाकिस्तानमा संरक्षण गरेर राखिएका दुई पुरातात्विक स्थल कटासराज र तक्षशिलाको सम्बन्ध भने नेपालसँग समेत सिधै जोडिएको छ ।
कटासराज मन्दिरमा एक विश्वविद्यालय पनि थियो । जहां दर्शनशास्त्र र बौद्ध अध्ययनको ठूलो केन्द्र थियो । नाथ सम्प्रदायका संस्थापक गोरखनाथ एवं चिनिया प्रसिद्ध यात्री ह्वान साङ समेत यो विश्वविद्यालयमा पुगेका थिए ।
यसर्थ मान्ने गरिन्छ, कटासराज क्षेत्र हिन्दु र मुस्लिम र बौद्ध समुदायको भाइचारा सम्बन्धको सेतु स्थल पनि हो । विदेशी आक्रमणकारीले समाप्त पारेको वैभवलाई कटासराज क्षेत्र आसपास बस्ने हिन्दु समुदायले पुनः सम्हालेर राखेका थिए । अहिले पनि मुस्लिम समुदायले अल्पसंख्यक हिन्दु समुदायको यो पवित्र मन्दिर संरक्षणका लागि भाइचारा सम्बन्ध स्थापित गरेका छन् ।
भारत र पाकिस्तानबीच विभाजन अघि यस ठाउँमा हिन्दु समुदायको ठूलो बसोबास रहेको थियो । कटासराज हिन्दु समुदायको आस्थाको केन्द्र रहेको थियो । विभाजन पछि हिन्दु समुदाय यहाँबाट विस्थापित भए । विभाजनको मार यस क्षेत्रमा पर्यो । हिन्दु समुदाय विस्थापित भएपछि यहांको वैभव पनि नासिंदै गएको बताउंछन् कटासराजका केयरटेकर एवं पन्जाव विश्वविद्यालयमा हिन्दी र पन्जावी गुर्मुखीका लेक्चरर अजहर अब्बास ।
भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयीले पाकिस्तानको भ्रमण गर्दा यो ठाउंमा आएका थिए । खण्डहर मात्र देख्दा वाजपेयी दुखित बनेका थिए । पछि पाकिस्तान सरकारले यो ऐतिहासिक धार्मिकस्थललाई संरक्षण गर्न सुरु गर्यो । अहिले कटासराज क्षेत्रमा पर्खाल लगाउने, पुराना ऐतिहासिक सम्पदाको जिर्णोद्वार गर्ने काम दु्रत गतिमा भैरहेको छ ।
पाकिस्तान सरकारले कटासराजलाई विश्व सम्पदा सूचीमा दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ । पाकिस्तान र भारतबीच रहेको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका बीच पनि कटासराज दुई मुलुकका जनताबीच रहेको धार्मिक एकताको सेतु बनिरहेको छ र बनिरहने नै देखिन्छ । मन्दिर र आसपासको क्षेत्रको जिर्णोद्वार जति छिटो हुन्छ, त्यति नै आतुर हजारौं हिन्दु तिर्थयात्री यहाँ आउनका लागि लालायित हुनेछन् । र, यसका लागि पाकिस्तानले कटासराजको धार्मिक महत्वको अन्तराष्ट्रिय स्तरमै प्रचार प्रसार समेत गर्न जरुरी छ ।
तक्षशिला मानव विकास सुचकांकमा संसारभरकै उन्नत स्थलमध्ये एक मानिन्थो । तक्षशिलामा रहेका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नका लागि संसारभरबाट विद्यार्थीहरू पुग्थे भन्ने विश्वास गरिन्छ । तक्षशिला नगर विद्या र शिक्षाको महान केन्द्रको रुपमा प्रसिद्ध थियो । वैदिक कालको अन्तिम शताब्दीपूर्व यसको ख्याति त्यति धेरै थिएन । तर बौद्ध युगमा यो क्षेत्र विद्याको सर्वमान्य स्थान बन्यो । बनारस, राजगृह, मिथिला एवं उज्ज्येन जस्ता स्थानबाट विद्यार्थीहरू पढ्न आउँथे । विश्वप्रसिद्ध गुरुहरूबाट अध्यययन गर्न पाउंदा विद्यार्थीहरू पुलकित हुन्थे ।
इस्लामिक गणतन्त्र पाकिस्तानले तक्षशिलाको संरक्षण गरी यस क्षेत्रलाई मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरेको छ । प्राचिन तक्षशिलाको खण्डहरको खोजी गर्ने काम बृटिश जनरल कनिङ्घमले सुरु गरेका थिए । तर ठोस काम भने सन् १९२१ पछि हुन थालेको थियो । सर जनरल मार्शलको नेतृत्वमा भएको उत्खनन कार्य पाकिस्तानले आज पनि जारी राखेको छ ।
तक्षशिक्षाका कैयौं स्थानको अवशेष निकालिएको छ । भिन्न भिन्न युगमा तक्षशिला नगरमा विदेशी आक्रमणबाट ध्वस्त भएका वस्ती र सभ्यताको खोजी गर्ने क्रममा फेला परेका पुरातात्विक वस्तुहरूलाई तक्षशिला संग्राहलयमा संरक्षित गरेर राखिएको छ । चीनको ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्क सीजीटीएनले तक्षसीलाबारे वृत्तचित्र बनाएको छ ।
राष्ट्रसंघीय आयोग युनेस्कोले तक्षशिलालाई सन् १९८० मा विश्व सम्पदा सुचीमा सुचिकृत गरेको थियो । सन् २०१० मा तक्षशिलालाई विश्वका त्यस्ता प्राचिनतम् शहरको सुचीमा सुचिकृत गरियो, जुन शहरहरूमा शासकहरूले नृशंश आक्रमण गरेर सभ्यताकै नाश गरिदिए ।
तक्षशिलाको सम्बन्ध नेपालसँग जोडिएको छ । लुम्बिनी र तक्षशिलाको सम्बन्ध रहेको छ । यसैले अनुसन्धानकर्ताहरूले यी दुई महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलको सम्बन्धको खोजी गर्न थालेका छन् । काठमाडौंस्थित पाकिस्तानी दूताबासले सेन्टर फर एडभान्स स्टडिज इन साउथ एशियासँगको सहकार्यमा लुम्बिनी र तक्षशिला सम्बन्धबारे गतवर्ष काठमाडौंमा सेमिनार गरेको थियो । नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूत मजहर जावेदले दुई ऐतिहासिक स्थलको सम्बन्धमा थप खोजी हुनुपर्ने बताएका थिए । सो सेमिनारमा नेपाली अनुसन्धानकर्ता प्रा.डा. अरुण गुप्तो र प्रा.डा. संगीता रायमाझीले पुरातात्विक महत्वको लुम्बिनी र तक्षशिलाबीच गहिरो ऐतिहासिक सम्बन्ध भएको तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए ।
नेपालको लुम्बिनीको चर्चा सवत्र्र फैलिएको छ । लुम्बिनीबारे विगतमा फैलाइएको भ्रमपूर्ण प्रचार समाप्त भएका छन् । यद्यपी अझै पनि विश्व समुदायलाई लुम्बिनीबारे नेपालले सही ढंगले मार्केटिङ गर्न सकेको छैन । यसैगरी, तक्षशिलालाई पाकिस्तानले भरपुर मार्केटिङ गर्न सकेको छैन । इस्लामिक गणतन्त्रभित्र संरक्षित गरेर राखिएका बौद्ध र हिन्दु दर्शनसम्बद्ध यो ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण, थप उत्खनन थप अध्ययन अनुसन्धान र प्रचारको भने अझ बढी आवश्यक छ ।
लुम्बिनीस्थित मायादेवी मन्दिर खुला गर्न माग